Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Tiorkmenistana
Tahiry isam-bolana Mey 2015 1 Lahatsoratra Avrily 2015 1 Lahatsoratra Marsa 2015 1 Lahatsoratra Jolay 2014 1 Lahatsoratra Febroary 2014 1 Lahatsoratra Marsa 2013 1 Lahatsoratra Febroary 2013 2 Lahatsoratra
Novambra 2012 1 Lahatsoratra Jona 2012 1 Lahatsoratra Oktobra 2011 1 Lahatsoratra Avrily 2011 1 Lahatsoratra Tantara misongadina mikasika ny Tiorkmenistana	Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka Rehefa antontan'isa no resaka, dia mijanona manaraka am-bokony fotsiny ny foto-kevitra fony faha-Sovietika ny governemanta Tiorkmena, toy ny amin'ny boky fandrahoan-tsakafo, fanodinkodinana angon-tahiry sy fanalàna an'izay marina rehetra mety manelingelina. Tena avoakan'ny haino aman-jerim-panjakana izay mitondra amin'izao fotoana izao tsara mihitsy ny 'Antontan'isa tsara', toy ny fiakaran'ny vokatra, fa ny... 26 Avrily 2015 Diso Ve Ireo Turkmen Mpanohitra Namoaka Fihetsika Voarara Tao Amin'ny YouTube? Mpanoratra Anna Fergana · Mediam-bahoaka 13 Jolay 2014 Zavatra Dimy Tsara Fantatrao Amin'ny Mariazy Turkmen Mpanoratra Anna Fergana · Mediam-bahoaka 30 Marsa 2013 Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka Mpanoratra Anna Fergana · Fahasalamàna Tantara Malaza Indrindra Manerantany 04 Janoary 2015JamaikaAo Jamaika: Afaka Manao Izay Hanaitaitra Ve No Sady Hitàna Biraom-panjakàna Ny Vehivavy?
Tantara mikasika ny Tiorkmenistana 08 Mey 2015
Mpihiran'i Turkmenistan Iray Mampiakatra ny Varotry ny Apple Mpanoratra Anna Fergana · Mediam-bahoaka Vao avy nahazo dokambarotra avy amin'ny loharano tsy nampoizina ny iPhone an'ny Apple: dia kintan'ny mozika pop iray ao Turkmenistan mitoka-monina.
Tafaverin'ireo Mpikatroka Nomerika Amin'ny Toerany Ny Grani.Ru Sy Ireo Tranonkalam-baovao Hafa Voasivana Mpanoratra Tetyana Lokot · Eoropa Afovoany & Atsinanana Mampiasa ny teknikan'ny didom-pitaratra manamaro isa ny fidirana amin'ireo habaka sivy voasivana sy hametraka ny dindony ao anatin'ny lohamilin'ireo orinasa goavan'ny aterineto ny mpikatroka hahamora ny fidirana aminy
Matahotra Angaha Ireo Tiorkmenina Talohan'ny Lalao Olaimpikan'ny Andro Ririnina Ao Sochi? Mpanoratra Anna Fergana · Fanatanjahantena Tsy nandefa na dia atleta iray aza i Tiorkmenistana ho fandraisany anjara amin'ny Lalao Olaimpika fanao amin'ny andro ririnina tamin'ity taona ity . Ny filoham-pirenena izay mpankafy fanatanjahantena ihany no solontena nalefan'ny firenena.
Tiorkmenistana: Zon'Olombelona? Zon'Olombelona Inona? Mpanoratra Anna Fergana · Fahalalahàna miteny Ao Tiorkmenistana, miaraka amin'ny laharany tafiditra ho ny "ratsy indrindra amin'izay ratsy" eran-tany mpanitsakitsaka zon'olombelona, toy ny 'nofinofy' no fahitana ny mety ho tena fisian'ny zo tahaka izany. Manakiana ny fitondrana mpamoritra tantanan'i Ashgabat mikasika ny fitsinjaràna politika isam-paritra ny maro amin'ireo mpisera anaty aterineto. Kanefa ny sasany kosa milaza... 05 Febroary 2013
Mandao An'i Tiorkmenistana Ireo Mpirotsaka An-tsitrapon'ny Peace Corps Mpanoratra Anna Fergana · Fampandrosoana Nolazaina fa hanakatona ny fandaharan'asany any Tukrmenistan ny Peace Corps - fandaharanasan'ny mpirotsaka an-tsitrapo tantanan'ny governemanta Amerikana - ary hiala ny firenena izy ireo ny faran'ny 2012. Maro ireo Turkmen mpampiasa aterineto no mihevitra fa handatsaka lalina kokoa ny firenena anatin'ny fitokana-monina sy hametra ny fahafahan'ny tanora hahazo fanabeazana izany... 17 Jona 2012
Tiorkemenistana: Mamarana Ny Fanaovan'ny Fanjakana Ampihimamba Ny Fiverenan'Ilay Tambajotranà Finday Rosiana Mpanoratra Venera · Fitantanam-pitondrana Taoriana fikatonana tsy nisy fanazavana nataon'ny governemanta tamin'ny 2010, hamerina ny asany any amin'ny firenena ilay tambajotra mpandraharaha finday Rosiana malaza MTS, izay nanana mpanjifa sahabo eo amin'ny antsasaky ny mponina Tiorkemenistana eo. Faly ireo mponina ao Tiorkemenistana mpampiasa aterineto amin'ireo vaovao ireo, manome sosokevitra ny amin'ny hanomezan'ny tambajotra tolotranà... 30 Oktobra 2011
Global Voices Rosiana Miara-miasa Amin'ny Neweurasia.net Mpanoratra Ekaterina · Kazakhstan Faly izahay mampilaza ny fiaraha-miasa ny Global Voices Rosiana miaraka amin'ny Neweurasia.net, iray amin'ireo sehatry ny valantserasera lehibe indrindra ao Azia Afovoany, izay manana mpihaino Anglisy sy Rosiana marobe. Miompana manokana amin'ny vaovao sy fanadihadiana nataon'ny tanora avy ao an-toerana ny Neweurasia. Manazava bebe kokoa ny vaovao tsy voatantara tsara ny...
25 Avrily 2011
Azia Afovoany: “Cyber Chaikhana,” Boky Nosoratan'Ireo Mpitoraka Bilaogy Mpanoratra Alexey Sidorenko · Kazakhstan "Cyber Chaikhana" dia tetikasam-boky iray mikasika ireo mpitoraka bilaogy any Azia Afovoany sy ny fomba fahitàn'izy ireny ny any amin'ny faritra, ny kolotsaina sy ny fianana andavanandro. Natontan'i Christopher Schwartz sy navoakan'i HIVOS, ilay boky dia fantina an'ireo fitantarana nosoratan'ireo mpitoraka bilaogy ao amin'ny NewEurasia.net, ilay tambajotra fitorahana bilaogy ao... Ireo pejinay momba an i Tiorkmenistana
Tselatra mikasika ny Tiorkmenistana
15 Novambra 2012Mediam-bahoaka‘Ny Varavaran'ny Helo’ Any Turkmenistan
Asehoy daholo Tselatra mikasika ny Tiorkmenistana »Araho Twitter